Trump: Mareykanka iyo UK waxa ay ka wadashaqeynayaan heshiis ganacsi oo ‘aad muhiim u ah’ - BBC News Somali
Trump: Mareykanka iyo UK waxa ay ka wadashaqeynayaan heshiis ganacsi oo ‘aad muhiim u ah’
Image caption Boris Johnson iyo Donald Trump oo isgacan qaadaya
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay soconayaan wadahadallo ku saabsan heshiis ganacsi "oo aad muhiim ah" oo uu la leeyahay UK.
Heshiis labada dal ay yeeshaan kaddib markii Britain ay isaga baxdo Midowga Yurub ayaa waxaa suuragal ah inuu horseedo ganacsi ka badan "saddex ilaa afar, xitaa jeer" midka haatan jira, waxaa sidaasi sheegay madaxweynaha Mareykanka.
Kaddib markii uu Jimcihii khadka taleefanka kula hadlay Boris Johnson, ayuu Mr Trump waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha cusub uu noqon doono mid "weyn".
Mr Trump ayaa sheegay in ganacsiga markii hore ka dhaxeeyay Mareykanka iyo UK ay "waxyeeleysay" xubinnimadii Britain ee Midowga Yurub.
Haddaba markii UK ay Midowgaasi isaga baxdo, ayuu ku daray, waxaa laga filan karaa "inay wax badan" ka qabato gacansiga kala dhaxeeya Mareykanka.
Fox: 'Ka bixida Midowga Yurub ee UK waa fursad dahab ah'
Mr Johnson iyo Mr Trump ayaa sheegay inay "sida ugu dhaqsiyaha badan" u bilaabi doonaan wadahadallada rasmiga ah kaddib markii Britain ay isaga baxdo Midowga Yurub.
Image caption Heshiis ganacsi oo dhexmaray Midowga Yurub iyo Laatiin Ameerika oo ay Brazil ku jirto ayaa laga wadaxaajoonayay 20 sanadood.
Heshiiska Midowga Yurub iyo Canada ee meesha ka saaray 99% canshuuraha ayaa waxaa laga wadahadlayay todoba sanadood, halka heshiiskii Juun ee Midowga Yurub iyo Laatiin Ameerika uu yimid kaddib 20 sanadood oo wadaxaajood ah.
Midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa muddo sanado ah ku jiray wadahadallo ganacsi oo marna furma marna xirma hasayeeshee wadahadallo cusub ayaa waxaa dhawaan meelmariyay Midowga Yurub.
Xilli Mr Trump iyo Mr Johnson ay u muuqdaan inay danaynayaan inay hehsiis gaaraan, ayaa waxaa suuragal ah inay qaadato sanado, walow ay qaab ahaan fududdahay in hal dal aad la xaajootid intii aad dalal badan oo isku xiran la xaajoon laheyd.
Barack Obama ayaa 2016 sheegay in heshiiska ganacsi ee Mareykanka iyo UK ay suuragal tahay inuu qaato 10 sanadood haddii UK ay isaga baxdo Midowga Yurub.
Waqtigan la joogo waa imisha ganacsiga ka dhaxeeya Mareykanka iyo UK?
Mareykanka ayaa iskaashi ganacsi iyo mid maalgashi ballaaran waxa uu la leeyahay UK, oo markii si loo fiiriyo waaba midka ugu ballaaran.
Sida ku cad shaxdii ugu dambaysay ee uu soo saaray xafiiska istaatistikada qaran ee UK Mareykanka oo Puerto Rico ay ku jirto ayaa ah dalka iskaashiga ganacsi ee ugu badan ee dalkaasi la leeyahay.
Ganacsiga ay isdhaafsadaan Mareykanka iyo UK ayaa lagu qiyaasaa inuu 2017 uu ku kacay £183.2 bilyan, taas oo aheyd 14.6% guud ahaan ganacsiga UK.
Xafiiska Mareykanka u qaabilsan Ganacsiga ayaa 2018 kharashka ganacsi ee labada dal dhexmaray waxa uu ku qiyaasay $262.3 bilyan oo u dhiganta (£211.9 bilyan).
Rugta Ganacsiga Mareykanka ayaa sheegtay in UK ay tahay dalka todobaad ee Mareykanku uu iskaashi ganacsi kala dhaxeeyo iyo weliba midka afraad ee loo beecgeeyo alaabaha iyo adeegyada Mareykanka.